Samsung Galaxy S9 ကို Star ဟုအမည်ပေးထားသည်။ Androidsis
Samsung Galaxy S9 ကို Star ဟုအမည်ပေးထားသည်။
ကိုရီးယားမီဒီယာအဆိုအရ အဆိုပါဘဲလ်ဆမ်ဆောင်းသည်ကြယ်ပွင့်အမည်သစ်ဖြစ်သော Galaxy S9 (နှင့်ပိုမိုကြီးမားသောမော်ဒယ်အတွက်“ စတား 2”) ကိုကုဒ်နံပါတ်ဖြင့်ရွေးချယ်ခဲ့သည်။ ဒါ့အပြင်အဲဒါပုံရသည် Device Development သည်အချိန်ဇယားအတိုင်း ၃-၄ လအကြာတွင်စတင်ခဲ့သည်ဒါပေမယ့်အံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်တော့ S9 ကဘာတွေကမ်းလှမ်းနိုင်မလဲဆိုတာအသေးစိတ်မသိသေးပါဘူး။ ပိုမိုမြင့်မားတဲ့ resolution Infinity Display ကိုရရှိနိုင်ပါတယ်။
ယခုအချိန်တွင်ကျွန်ုပ်တို့လုပ်နိုင်သမျှသည် Galaxy S9 သည် Galaxy S6 / S6 အစွန်းနှင့် Galaxy S7 အစွန်းတို့အကြား update အသစ်တစ်ခုကိုကိုယ်စားပြုနိုင်သည်ဟုယူဆနိုင်သည်။ ပိုမိုဆန်းသစ်သောအင်္ဂါရပ်များနှင့်ယခုနှစ်မြင်ကွင်းများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ပိုမိုကြီးမားသောပြောင်းလဲမှုများရှိသည်။ ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ထုတ်ကုန်များနှင့်
Galaxy S8 ကိုနာမည်ပြောင်ခဲ့သည် "Project Dream" ၎င်း၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုစဉ်အတွင်း Galaxy Note 8 တွင် "Great" ဟူသောကုဒ်နံပါတ်ပါရှိသည်။Samsung သည်အထင်ရှားဆုံးအမည်ပြောင်တစ်ခုဖြစ်သည်။
လွန်ခဲ့သောရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်ကပင် Galaxy S8 ကိုလွှတ်တင်ပြီးသည့်နောက်တွင် Samsung သည် Galaxy S9 ၏ပရိုဆက်ဆာကိုပြင်ဆင်ရန်အတွက် Qualcomm နှင့်အတူတကွလက်တွဲအလုပ်လုပ်ရပြီဖြစ်ကြောင်းသတင်းကြားရသည်။ ထို့အပြင်ကုမ္ပဏီသည်အထူးသဖြင့်စောစောစီးစီးစတင်ခဲ့သည်၊ Galaxy Note7နှင့်ပြoccurredနာများကဲ့သို့သောမည်သည့်ပြproblemsနာကိုမဆိုရှောင်ရှားရန်။
အခြားတစ်ဖက်တွင်, ပြီးခဲ့သည့်Aprilပြီလကုမ္ပဏီလည်းပြင်ဆင်။ စတင်ခဲ့သည် Galaxy S9 အတွက်ပထမဆုံးမျက်နှာပြင်နမူနာများ, နှင့်ထုတ်လုပ်သူနှင့်နီးစပ်သူအရင်းအမြစ်များအများအပြား၏အဆိုအရ Samsung က device ရဲ့ module တွေ (အာရုံခံကိရိယာများ, ကင်မရာများ, etc) အပေါ်လုပ်ဆောင်နေသည်။
နောင်လာမယ့်နှစ်မှာ Samsung ကဘာတွေအံ့သြစရာကောင်းနေသလဲဆိုတာကိုစောင့်ကြည့်ရ ဦး မှာပါ။ ဒီအချိန်မှာရှင်းရှင်းလင်းလင်းတစ်ခုကတော့ Galaxy S9 မော်ဒယ်လ်နှစ်ခုဟာမျက်နှာပြင်အရွယ်အစားနဲ့ resolution အမျိုးမျိုးရှိတဲ့အတူရှိနေ ဦး မှာပဲ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android ထုတ်ကုန်များ » မိုဘိုင်း » Samsung » Samsung Galaxy S9 ကို Star ဟုအမည်ပေးထားသည်။
အိန်ဂျယ် Silvio Pizarro ဟုသူကပြောသည်
သင်“ Great” key ကိုဖြတ်သန်းသွားသည်ဟုသင်ပြောသော Galaxy Note 8 ကော။ Samsung Galaxy Note7fiasco နဲ့ Samsung Note Line ကိုမရပ်တော့ဘူးဆိုတာငါနားလည်ခဲ့တယ်။ ကျွန်ုပ်သည်ပရိသတ်တစ် ဦး ဖြစ်သည် (မှတ်ချက် ၅ မှရေးသည်၊ မှတ်ချက် ၂ ခုမှရရှိသည်)
Angel Silvio Pizarro အားပြန်ပြောပါ
Dany အိမ်ထောင်သည် ဟုသူကပြောသည်
စလာသည် !!!! s8 ဟာလွန်ခဲ့တဲ့သုံးလကတောင်မပြည့်သေးတဲ့မိုဘိုင်းဖုန်းတွေကိုလူတွေကြိုက်စေပြီးသင်ဟာကောလာဟလတွေနဲ့စပြီး ember ကိုစတင်ပေးနေပြီ !!! လေးလံသော !!!!
Dany Casado သို့ပြန်သွားပါ